अष्ट्रेलियाले भन्योः रुसविरुद्ध लड्न युक्रेनलाई हामी पनि हतियार दिन तयार छौँ
एजेन्सी । अस्ट्रेलियाले युक्रेनलाई घातक हतियार दिने वाचा गरेको छ । तर, यसअघि अस्ट्रेलियाले युक्रेनलाई घातक नहुने हतियार दिने बताएको थियो ।
अष्ट्रेलियामा कोरोनाका कारण एकैदिन २८ जनाको मृत्यु
सिड्नी । अष्ट्रेलियामा कोरोना संक्रमणका कारण थप २८ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै अष्ट्रेलियामा कोरोनाका कारण ५०९६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
जनसम्पर्क समिति अस्ट्रेलियाको अधिवेशन सम्पन्न
सिड्नी । नेपाली काँग्रेसको अस्ट्रेलियामा अवस्थित भातृ संस्था जनसम्पर्क समिती अस्ट्रेलियाको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनले सुरेश गुरुङ सभापति रहेको नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको छ ।
अष्ट्रेलियामा कोरोनाका कारण एकैदिन ६० जनाको मृत्यु
सिड्नी । अष्ट्रेलियामा कोरोना संक्रमणका कारण थप ६० जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै अष्ट्रेलियामा कोरोनाका कारण ५०२५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
अष्ट्रेलियामा कति छ सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या ?
सिड्नी । अष्ट्रेलियामा कोरोना संक्रमणका कारण थप ३३ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै अष्ट्रेलियामा कोरोनाका कारण ४९६२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरे भारतले कसलाई साथ दिनेछ ? अमेरिकाको छ यस्तो दाबी
एजेन्सी । युक्रेन र रुसबीचको विवाद सारा विश्वका लागि जटिल समस्या बन्दै गएको छ । रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरे अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्ने अनुमान पनि गरिएको छ । त्यसले विश्वयुद्धको रुप लिन सक्ने केही विज्ञहरुको विश्वास छ ।
अष्ट्रेलियामा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढ्यो
सिड्नी । अष्ट्रेलियामा कोरोना संक्रमणका कारण थप ६३ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै अष्ट्रेलियामा कोरोनाका कारण ४७९५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
अष्ट्रेलियामा कोरोनाका कारण एकैदिन ५७ जनाले ज्यान गुमाए
सिड्नी । अष्ट्रेलियामा कोरोना संक्रमणका कारण थप ५७ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै अष्ट्रेलियामा कोरोनाका कारण ४७२६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसँग नेपालका लागि अस्ट्रेलियन राजदूत फेलिसिटी भोल्कले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् ।
अष्ट्रेलियामा कोरोना संक्रमणका कारण थप ४६ जनाको मृत्यु
सिड्नी । अष्ट्रेलियामा कोरोना संक्रमणका कारण थप ४६ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै अष्ट्रेलियामा कोरोनाका कारण ४६६४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।